Fadhato ka dhacday Florida!
Tukaamo ku yaal magaalada Miami ee gobolka Florida oo tuugo fadhataysatay.
Duufaanta Irma oo ku dhufatay Florida
Miami, Fort Lauderdale, Naples iyo Hollywood ayaa ka mid ah meelaha ay ku dhufatay duufaanta Irma
Dukaanka hadiyadaha kali ah lagu iibiyo ee Muqdisho
Telefishinka BBC Soomaali ayaa booqday dukaan lagu gado hadiyadaha keli ah oo ku yaalla magaalada Muqdisho.
Quursiga gabooyaha muddo ayuu soo jiray
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in Cabdikariin Sheekh Muuse oo ay dhawaan ku wareejisay dowladda Itoobiya uu ahaa sarkaal sare oo ka tirsan ONLF, xiriirna la lahaa kooxda Al Shab
Marwo Safiya: Haweenay Soomaalida Kenya ah oo rag kaga adkaatay doorasho
Juxa oo ka hadlay sababta uu ruqsad la'aan BBC ula hadlay
Wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka Cabdi Faarax Siciid ayaa sheegay inuu u madax banaan yahay oo uusan ruqsad u raadsanayn wixii shaqada la xiriira, oo uu kala yaqaanno waxa uu rursad u raadsanayo iyo waxa kale.
Khadro Daahir Cige iyo waayaheedii fanka
Halkan ka daawo waraysi aan la yeelanay Khadro Daahir Cige
Catarka ubaxa laga sameeyo ee Hindiya : Warbixin & Video
Wax ka badan 400 boqol oo sanno, magaalada Kannauj ee dalka Hindiya waxa ay caan ku ahayd soo saarista catarka laga sameeyo ubaxa . 20 sano ka hor waxaa magaaladan ku yiiley illaa 700 oo ah warshadaha yaryar ee catarka lagu sameeyo, maantana waxa kaliya oo ku haray wax ka yar 100 warshadood.
Halkan ka daawo muuqaal sharaxaya xukunka iyo siyaasadda dalka Angola
Xaaladda Gaarisa oo xasilooni ku soo noqotay
Magaalada Gaarisa oo rabshado ka dhaceen markii lagu dhawaaqay natiijada doorashada madaxda deegaanka ayaa maanta xasiloon oo noloshuna caadigeedii ku soo noqonysaa.
Halkan ka daawo taariikhda Uhuru Kenyatta
Aadan Bare ayaa hadal kooban jeediyay markii la doortay